musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Philippines Kupwanya Nhau » Ndege yePhilippines yakafa nhamba yekufa inokwira kusvika makumi mashanu nemaviri
Ndege yemauto yanga yakatakura vashandi vemauto vachangodzidziswa payakarovera uye kuputika murimi mushure mekupfuura nendege nguva dzichiti 11:30 mangwanani panguva yeSvondo
Vamwe vaviri vakapona pakakuvara zvakaipisisa vakafa muchipatara.
Kudzoreredza mashandiro ezve ndege zvikamu, kusanganisira bhokisi dema iro rakanyora data rekubhururuka, zviri kuenderera kunzvimbo yekuparadza.
Kuongorora kwakazara nezve tsaona yakarairwa nekukurumidza kana basa rekununura nekudzorera rapera.
Munyori wezvekudzivirirwa kwePhilippine, Delfin Lorenzana akazivisa nhasi kuti huwandu hwevakafa kubva mutsaona yendege kumaodzanyemba kwePhilippines hwakwira kusvika makumi mashanu nemaviri sezvo vamwe vaviri vakapona vakakuvara zvakaipisisa vakafa muchipatara.
Vese vatakuri 96 nevashandi vari mundege yeC-130H yakadonha pakumhara masikati eSvondo pachitsuwa cheJolo mudunhu reSulu vakaverengerwa, Dhipatimendi reNational Defense yakati, ichiwedzera kuti masoja makumi mana nemapfumbamwe akafa uye vamwe 49 vakakuvara.
Lorenzana akati vanhu vatatu vaive pasi vakaurayiwa uye vamwe vana vakakuvara.
Lorenzana akatorayira "kuferefetwa kuzere" kwenjodzi iyi "pachangopera basa rekununura nekudzorera."
Major General Edgard Arevalo, Armed Forces wePhilippines mutauriri, akataura mumusangano wepamhepo wevatori venhau kuti kudzora mashandiro ezve ndege zvikamu, kusanganisira bhokisi dema iro rakanyora data rekubhururuka, kuri kuenderera panzvimbo yekukanganisa, uye timu yekuferefeta yasvika Sulu.
Maminitsi mushure mekupunzika, mauto nevazvipiri vevanhu vakamhanyira kunzvimbo iyi kutsvaga nekununura. "Nevanhu vakaona, varwi vakati wandei vakaonekwa vachisvetuka kubva mundege isati yarova pasi, vachivadzivirira pakuputika kwakakonzerwa nenjodzi iyi," akadaro mauto.
Arevalo akati kukwira ndege kweC-130H ndechimwe che "zviitiko zvinotyisa" zvakaitika mumauto ehondo.